पात्रलाई जीवन्त बनाउने दयाहाङमा कुन–कुन गुण छन् ? | Emedia Hub UK
Home Entertainment पात्रलाई जीवन्त बनाउने दयाहाङमा कुन–कुन गुण छन् ?
पात्रलाई जीवन्त बनाउने दयाहाङमा कुन–कुन गुण छन् ?
हिरोहरूलाई पो चाहिन्छ त कद र शरीर, दयाहाङ त अभिनेता हुन् । हरेक चलचित्रमा उस्तै लाग्ने संवाद र अभिनय गरे पनि दयाहाङ राई दर्शकहरूबाट रुचाइएका अभिनेता हुन् । दयाहाङ अचेल नृत्य पनि गर्न थालेका छन् भने उनी गोरु जुधाई द्वन्द्व गर्न समेत सक्षम छन् । स्टाइलिसको सवालमा दयाहाङ राई ल्याङफ्याङ नै छन् ।साप्ताहिले लेखेको छ ।
कति कमाए आमिरको ‘सिक्रेट सुपरस्टार’ले ?